टर्कीका लागि भिसा कसरी पाउने? व्यापार र टर्कीका लागि पर्यटक भिसाका लागि द्रुत गाईड - ALinks
टर्कीमा छोटो प्रवासको लागि भिसा प्राप्त गर्न, पर्यटन वा व्यवसायको लागि, संसारमा धेरै जसो राहदानीहरूको लागि एकदम सजिलो छ। तपाईंसँग एक वा दुई वा तलका विकल्पहरू तपाईंको राहदानी र भिसामा निर्भर छन् जुन तपाईंसँग यसमा पहिले नै छ।
तपाईंलाई कुनै भिसा चाहिदैन। धेरै मध्य र दक्षिण अमेरिका, र अधिक उत्तरी र मध्य एशियाबाट आएका यूरोपका मानिसहरूलाई भिसा आवश्यक पर्दैन।
अल्बानिया, अन्डोरा, अर्जेन्टिना, अजरबैजान, बेलिज, बोलिभिया, बोस्निया र हर्जेगोविना, र अधिक देशहरू।
तलका प्रत्येक देशका लागि थप विवरणहरू हेर्नुहोस्।
तपाईंलाई भर्खर ईeभिसा वा आगमन बेला भिसा चाहिन्छ। त्यो working कार्य दिन लिन्छ र मा अनलाइन गर्न सकिन्छ e-भिसा पृष्ठ टर्की गणराज्यको इलेक्ट्रोनिक भिसा आवेदन प्रणाली। यो उत्तर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इन्डोनेशिया, साउदी अरेबिया, र अधिकबाट आएको व्यक्तिको लागि मामला हो। तलका प्रत्येक देशका लागि थप विवरणहरू हेर्नुहोस्।
तपाईंले नजिकको दूतावासमा भिसाका लागि आवेदन दिन आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो अनुप्रयोग सुरू गर्न सक्नुहुनेछ पूर्व-आवेदन र भेट पृष्ठ रिपब्लिक टर्की को कन्सुलर प्रोसिजर यदि तपाईंसँग शेंजेन भिसा वा अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा छ भने तपाईं एकल वा बहु प्रविष्टि e-भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ e-भिसा पृष्ठ। यो धेरै जसो अफ्रिकी देशहरू, दक्षिण एशियाली र पश्चिमी एशियाई देशहरूको लागि मामला हो।
तपाईं आफैंमा टर्की भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईंलाई भिसा आवेदनको साथ मद्दत चाहिन्छ भने तपाईं भरपर्दो भिसा सेवा मार्फत जान सक्नुहुन्छ। VisaHQ or आईवीसा। तपाईको राष्ट्रियता र तपाईसँग भएको समयमा निर्भर गर्दै, एउटा सेवा अर्को भन्दा सुविधायुक्त हुन सक्छ।
म कहाँ टर्की भिसाका लागि आवेदन दिन्छु?
भिसाको लागी आवेदन दिनुहोस्
आफ्नै आफ्नै मा
VisaHQ को साथ
भिसा आवेदन हो हो हो
विज्ञ सल्लाह केही हो हो
कागजात जाँच no हो हो
टर्कीको भिसा नीति
यहाँ सर्तहरूको सूची छ, यसलाई डबल-जाँच गर्नुहोस् आधिकारिक पेज टर्की विदेश मन्त्रालयबाट तपाइँको टर्की भिसा कसरी प्राप्त गर्ने भनेर हेर्न।
अफगानिस्तान: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने तपाईं एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एक महिनाको लागि https://www.evisa.gov.tr/ मा, यदि तपाईंले केहि आवश्यकताहरू मेल गर्नुभयो भने। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
अल्बानिया: तपाईंलाई टर्कीमा यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन, छ महिना भित्र 90 ० दिनको लागि। जब तपाईं कूटनीतिक, कन्सुलर मिसनहरूमा वा टर्कीमा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई आफ्नो असाइनमेन्ट अवधिको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
अल्जेरिया: तपाईंलाई भिसा आवश्यक पर्दैन यदि तपाईंसँग members ० दिनको लागि यात्राको लागि सरकारी सदस्यहरूको लागि आधिकारिक राहदानी हुन्छ। अल्जेरियन नागरिकहरू, १। बर्ष भन्दा कम उमेर र 90 15 बर्ष भन्दा माथि उमेरकालाई १० दिन अवधिको लागि in ० दिनको लागि भिसा चाहिदैन। १ge देखि 65 90 वर्ष बीचको अल्जेरियन नागरिकलाई भिसा चाहिन्छ। वैध शेन्जेन, युएसए, युके, आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमतिसँग १ 180 देखि १ years वर्ष उमेर र to 15 देखि 65 old वर्ष उमेरकाले एक महिनाको अवधिमा एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्दछन्। https://www.evisa.gov.tr/.
अंगोला: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग मान्य शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईंले आफ्नो एक महिना अवधि एकल ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। www.evisa.gov.tr.
एन्टिगुवा - बार्बुडा: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईले तीन महिना लामो बहु ईन्ट्री ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/। तपाईको नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा पनि भिसा लिन सक्नुहुन्छ। वा तपाईं टर्की आइपुगेकोमा तीन महिना लामो बहु प्रवेश भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
अर्जेन्टिना: तपाईलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
आर्मेनिया: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं एक महिना लामो बहु प्रविष्टि ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ https://www.evisa.gov.tr/.
अष्ट्रेलिया: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईले तीन महिना लामो बहु ईन्ट्री ई-भिसा https://www.evisa.gov.tr/ मा पाउन सक्नुहुन्छ।
अष्ट्रिया: तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
अजरबैजान: तपाईलाई १ 90० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
बहामास: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाइँ एक https://www.evisa.gov.tr/ मा तीन महिना लामो बहुविध ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईं आफ्नो यात्राको लागि टर्कीमा 90 ० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
बहरिन: तपाईलाई टर्कीमा आउन भिसा चाहिन्छ र तपाईले days० दिन लामो एउटा प्रविष्टि e-भिसा पाउन सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईं एक आधिकारिक राहदानी सहित सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाईं पनि टर्की आउन भिसा आवश्यक छ तर तपाईं आगमन मा एक 15 दिन भिसा प्राप्त।
बंगलादेश: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने तपाईं एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एक महिनाको लागि https://www.evisa.gov.tr/ मा, यदि तपाईं केहि आवश्यकताहरू मेल गर्नुभयो भने। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट वा आधिकारिक सेवा पासपोर्ट छ, सामान्यतया सरकारी कर्मचारीहरूलाई दिइयो भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा तपाईंको यात्राको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
बार्बाडोस: तपाईंलाई टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। तपाइँ एक https://www.evisa.gov.tr/ मा तीन महिना लामो बहुविध ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईं आफ्नो यात्राको लागि Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
बेलारूस: तपाईलाई days० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन। तपाईं एक वर्ष अवधि भित्र मात्र 30 ० दिन बस्न सक्नुहुन्छ।
बेल्जियम: तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
बेलिज: तपाईलाई 90 ० दिन सम्मको यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
बेनिन: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने तपाईं एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एक महिनाको लागि https://www.evisa.gov.tr/ मा, यदि तपाईं केहि आवश्यकताहरू मेल गर्नुभयो भने। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
भुटान: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं आफ्नो नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा १ days दिन लामो भिसा लिन सक्नुहुन्छ।
बोलिभिया: तपाईलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
बोस्निया-हर्जेगोविना: तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
बोत्सवाना: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
ब्राजील: तपाईलाई 90 ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
ब्रूनेई: तपाईलाई days० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
बुल्गारिया: यदि तपाईंसँग कूटनीतिक वा सेवा पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई days० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। १ 30० दिनको कुनै पनि अवधिमा तपाईंलाई days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
बुर्किना फासो: तपाईंलाई टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
बुरुंडी: तपाईंलाई टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं १ Turkey० दिनको अवधिमा multiple ० दिन सम्म धेरै पटक भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
कम्बोडिया: टर्कीमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग आधिकारिक सेवा पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई days० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
क्यामरून: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
यदि तपाईंसँग आधिकारिक राहदानी छ भने त्यो कूटनीतिक, सेवा वा विशेष पासपोर्ट हो, र तपाईं आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डलको हिस्सा हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई प्रवेशको पहिलो दिनदेखि counting ० दिन गणनाको लागि टर्कीको भिसा आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग आधिकारिक राहदानी छ तर तपाईं आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डलको हिस्सा हुनुहुन्न भने, तपाईंलाई टर्कीको लागि भिसा चाहिन्छ।
क्यानाडा: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने तपाईंले मल्टिपल एन्ट्री इ-भिसा पाउन सक्नुहुन्छ तीन महिनाको लागि मान्य https://www.evisa.gov.tr/.
केप भर्डे: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
मध्य अफ्रीकी गणराज्य: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
चाड: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
चिली: तपाईलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
जन गणतन्त्र चीन: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं एक महिना लामो एकल ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ https://www.evisa.gov.tr/. यदि तपाईंसँग आधिकारिक सेवा पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई days० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
कोलम्बिया: तपाईलाई 90 ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
कोमोरोजः यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
कोस्टा रिका: तपाईलाई days० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
कोटे डी आइवर: टर्कीमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक वा सेवा पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
क्रोएसिया: तपाईंलाई १ a० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
क्युबा: टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईं आफ्नो यात्राको लागि Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
चेक गणराज्य: तपाईलाई 90 ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक क Cong्गो: तपाईंलाई टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
डेनमार्क: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
जिबूती: टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग आधिकारिक सेवा पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई १ 90० दिनमा days ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
डोमिनिका: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईले तीन महिना लामो ईन्ट्रा भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/ मा। तपाईको नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा पनि भिसा लिन सक्नुहुन्छ। वा तपाईं टर्की आइपुगेकोमा तीन महिना लामो बहु प्रवेश भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
डोमिनिकन रिपब्लिक: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईले तीन महिना लामो ईन्ट्रा भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/ मा। तपाईको नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा पनि भिसा लिन सक्नुहुन्छ। वा तपाईं टर्की आइपुगेकोमा तीन महिना लामो बहु प्रवेश भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
पूर्वी टिमोर: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। पूर्वी टिमोरका नागरिकहरूले उनीहरूको days० दिनको एकल प्रवेश ई-भिसा वेब साइट मार्फत पाउन सक्दछन् https://www.evisa.gov.tr/.
इक्वेडर: तपाईलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
इजिप्ट: टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईं २० बर्ष भन्दा कम उमेरको वा 20 45 बर्ष भन्दा बढी उमेरको हुनुहुन्छ भने तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ https://www.evisa.gov.tr/. यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/, तर तपाइँ टर्की एयरलाइन्स वा इजिप्ट एयर प्रयोग गरी टर्की पुग्नु पर्छ। यदि तपाईंसँग आधिकारिक राहदानी छ भने सामान्यतया सरकारी कर्मचारीहरूलाई दिइन्छ, तपाईं टर्कीमा Turkey ० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
एल साल्भाडोर: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
इक्वेटोरियल गुयना: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
एरिट्रिया: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
एस्टोनिया: तपाईंलाई १ 90० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
इथियोपिया: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/. यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
फिजी: तपाईंलाई टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। तपाइँ एक महिना लामो एकल ईन्ट्री भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ https://www.evisa.gov.tr/। तपाईं पनि निकटतम टर्की कूटनीतिक नियोगमा 90 ०-दिने बहु-प्रवेश भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईं आफ्नो यात्राको लागि टर्कीमा 90 ० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
फिनल्याण्ड: तपाईंलाई १ a० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
फ्रान्स: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि यात्राको लागि भिसा चाहिदैन।
गेबन: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ https://www.evisa.gov.tr/ मा, यदि तपाईं केहि आवश्यकताहरू मिलाउनुहुन्छ। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट वा सेवा पासपोर्ट छ भने तपाईं टर्कीमा s ० दिनको लागि कुनै पनि १ 90० दिनको अवधिको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
गाम्बिया: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने तपाईं एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एक महिनाको लागि https://www.evisa.gov.tr/ मा, यदि तपाईं केहि आवश्यकताहरू मेल गर्नुभयो भने। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
जर्जिया: तपाईलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
जर्मनी: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
घाना: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
ग्रीस: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
ग्रेनाडा: टर्कीमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाइँ एक https://www.evisa.gov.tr/ मा तीन महिना लामो बहुविध ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईं आफ्नो यात्राको लागि Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
ग्वाटेमाला: तपाईलाई 90 ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
गुयना: टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ, र तपाईं पेगासस एयरलाइन्स वा टर्की एयरलाइन्सको साथ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले एक महिना लामो एकल ई-भिसा https://www.evisa.gov मा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। .tr /। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
गुयना-बिसाउ: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
गुयाना: यदि तपाईंसँग आधिकारिक सेवा पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई १ 90० दिन भित्र 180 ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईंसँग भिसा हुनु आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो निकटतम टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा १ days दिनको भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
ग्रीक साइप्रियोट प्रशासन: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं via० दिनको एकल प्रवेश ई-भिसा वेबसाइट मार्फत पाउन सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/.
हैती: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईले तीन महिना लामो बहु ईन्ट्री ई-भिसा https://www.evisa.gov.tr/ मा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा पनि भिसा लिन सक्नुहुन्छ। वा तपाईं टर्की आइपुगेकोमा तीन महिना लामो बहु प्रवेश भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
होन्डुरस: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भ्रमणको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
ह Hongक Kong विशेष गणतन्त्र चीनको प्रशासनिक क्षेत्र (SAR): तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भ्रमणका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग 'ब्रिटिश नेश्नल ओभरसीज पासपोर्ट' छ भने तपाईले तीन महिना लामो बहु प्रवेश e-भिसा पाउन सक्नुहुनेछ https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग 'भिसा उद्देश्य ह Hongक Kong (DI) को लागी परिचय पत्रको परिचय' छ भने, तपाईं टर्की कूटनीतिक वा विदेशमा कन्सुलर मिसनबाट भिसा लिन सक्नुहुन्छ।
हंगेरी: तपाईं यस पासपोर्टको साथ भिसा लिन आवश्यक छैन टर्की मा यात्रा गर्न पहिलो दिन प्रवेश गरीएको १ 90० दिनमा days ० दिन।
आइसल्याण्ड: Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न यस पासपोर्टसँग भिसा लिन आवश्यक पर्दैन।
भारत: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं एक महिना लामो एकल ई-भिसा https://www.evisa.gov.tr/ मा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईले केही सर्तहरूसँग मेल गर्नुभयो। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
इन्डोनेसिया: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाइँले एक महिना लामो एकल ईन्ट्री भिसा पाउन सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक, अधिकारी वा सेवा पासपोर्ट छन् भने, तपाईंलाई days० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
इरान: तपाईलाई 90 ० दिन सम्मको यात्राका लागि भिसा चाहिदैन।
इराक: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/, तपाइँले केही सर्तहरूसँग मेल खाने कुराले। यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईं आफ्नो यात्राको लागि टर्कीमा 90 ० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
आयरल्यान्ड: तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन। सरकारी पासपोर्टको साथ सरकारी कर्मचारीहरूलाई टर्कीमा आउन भिसा चाहिन्छ।
इजरायल: तपाईलाई 90 ० दिनमा यात्राको लागि भिसा चाहिदैन।
इटाली: तपाईंसँग यस पासपोर्टको भिसा need ० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न आवश्यक पर्दैन।
जमैका: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाइँ एक https://www.evisa.gov.tr/ मा तीन महिना लामो बहुविध ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईं आफ्नो यात्राको लागि टर्कीमा 90 ० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
जापान: Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न यस पासपोर्टसँग भिसा लिन आवश्यक पर्दैन।
जोर्डन: तपाईसँग यस पासपोर्टको साथ भिसा हुनु आवश्यक पर्दैन टर्कीमा entry ० दिन यात्रा गर्नका लागि पहिलो प्रवेश मितिबाट गणना गरी। यदि तपाईं कूटनीतिक मिसनहरूमा वा टर्कीले मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई आफ्नो असाइनमेन्टको बेला भिसा आवश्यक पर्दैन।
काजाकिस्तान: तपाईलाई days० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
केन्या: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईंको नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा तपाईं तीन महिना लामो भिसा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट, आधिकारिक सेवा पासपोर्ट वा विशेष पासपोर्ट छ भने, तपाईं १ Turkey० दिनमा Turkey ० दिनको लागि टर्कीको भिसा लिन सक्नुहुनेछ, पहिलो प्रविष्टि मितिबाट गणना गरी।
किरिबाटी: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ।
कोसोभो: तपाईको भ्रमणका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन १ 90० दिनमा days ० दिनको लागि, प्रवेशको पहिलो दिन देखि गणना गर्दै।
कुवेत: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईले तीन महिना लामो बहु ईन्ट्री ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/.
किर्गिस्तान: तपाईलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
लाओस: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
लाट्भिया: तपाईलाई days० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक वा सेवा पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई 30 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
लेबनान: तपाईलाई visa ० दिनसम्म कुनै भिसाको आवश्यकता पर्दैन जुन १ 90० दिनको अवधिमा। यदि तपाईं कूटनीतिक मिसनहरूमा वा टर्कीले मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई आफ्नो असाइनमेन्टको बेला भिसा आवश्यक पर्दैन।
लेसोथो: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
लाइबेरिया: यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिन सम्म भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
लिबिया: यदि तपाईं १ 16 बर्ष भन्दा कम र 55 90 बर्ष भन्दा माथिको हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई कुनै १ 180० दिन अवधि भित्र within ० दिन सम्म भिसा आवश्यक पर्दैन। अन्यथा यदि तपाईको उमेर १ and र between 16 बीचमा छ भने तपाईसँग भिसा लिन आवश्यक पर्दछ। यदि तपाइँ १ 55 र 16 55 वर्ष बीचको हुनुहुन्छ र तपाइँसँग हालको श्यान्जेन, अमेरिका, युके वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाइँले एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक वा आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईंलाई कुनै छ महिनामा days ० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन।
लिकटेन्स्टीन: 90 ० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न यस पासपोर्टसँग भिसा लिन आवश्यक पर्दैन।
लिथुआनिया: तपाईंलाई १ a० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
लक्जमबर्ग: तपाईलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
मकाओ विशेष प्रशासन: तपाईको for० दिनको यात्राको लागि भिसाको आवश्यकता पर्दैन जनताको गणतन्त्र चीनको मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको राहदानीको साथ।
मेडागास्कर: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
मलावी: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/.
मलेसिया: तपाईलाई for ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
माल्दिभ्स: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईले तीन महिना लामो बहु ईन्ट्री ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग आधिकारिक राहदानी (कूटनीतिक, सेवा वा विशेष पासपोर्ट) छ भने, तपाईंलाई travel० दिनको लागि भ्रमणको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
माली: आधिकारिक / सेवा र तपाईंलाई यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
माल्टा: तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
मार्शल टापु: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ।
मोरिटानिया: तपाईंलाई टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। तपाईं कुनै पनि विदेश टर्की कूटनीतिक प्रतिनिधित्वबाट १ day दिन अवधि भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग एक आधिकारिक (कूटनीतिक, सेवा वा विशेष) पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि तपाईंको यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
मौरिसस: यदि तपाईं सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी हुनुहुन्छ भने तपाईं टर्कीमा s ० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ। टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तिनीहरूले वेबसाइट मार्फत एक महिना बहु प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्दछन् https://www.evisa.gov.tr/ वा विदेशमा टर्की कूटनीतिक प्रतिनिधित्वबाट तीन महिना अवधि बहु प्रवेश भिसा।
मेक्सिको: यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिन सम्म भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
सामान्य र सेवा / आधिकारिक राहदानीको साथ सरकारी कर्मचारी यात्रा टर्की आउन भिसा आवश्यक छ। त्यस्ता पासपोर्ट धारकहरूले विदेशमा टर्की मिसनहरूबाट 90 ०-दिनको बहु-प्रवेश भिसा पाउन वा वेबसाइट मार्फत 30० दिने एकल-प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्दछन्। https://www.evisa.gov.tr/.
मोल्डोभा: तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन। पहिलो प्रविष्टिको मितिबाट सुरू गर्दै।
मोनाको: Turkey ० दिन सम्म टर्कीमा यात्रा गर्न यस पासपोर्टसँग भिसा लिन आवश्यक पर्दैन।
मंगोलिया: टर्की भ्रमणका लागि तपाईलाई days० दिन सम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
मोन्टेनेग्रो: तपाईंलाई १ a० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
मोरक्को: Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न यस पासपोर्टसँग भिसा लिन आवश्यक पर्दैन।
मोजाम्बिक: तपाईंलाई यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/. यदि तपाईंसँग कूटनीतिक वा सेवा पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। दिन गणना पहिलो प्रविष्टिको मितिबाट सुरू हुन्छ र तपाईंको पासपोर्ट कम्तिमा months महिनाको वैधता हुन आवश्यक छ।
म्यानमार (बर्मा): यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ।
नामिबिया: यदि तपाईं सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी हुनुहुन्छ भने तपाईं टर्कीमा 90 ० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ। टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। नामिबियावासीहरूले आफ्नो एक महिना अवधि ईन् भिसा वेबसाइट https://www.evisa.gov.tr/ मार्फत पाउन सक्छन्।
नउरु: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं आफ्नो नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा १ days दिन लामो भिसा लिन सक्नुहुन्छ।
नेपाल: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं एक टर्की दूतावास वा विदेशमा कन्सुलेटबाट १ day दिन अवधिको भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग हाल छ शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति, तपाईं एकल प्रवेश ई-भिसा एक महिनाको लागि वैध पाउन सक्नुहुनेछ https://www.evisa.gov.tr/, तपाईंले निश्चित सर्तहरूसँग मेल खाने कुरा प्रदान गर्नुभयो। यदि तपाईंसँग ओ छfficial (कूटनीतिक, सेवा वा विशेष) राहदानी, तपाईं एक महिना अवधि भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको नजिकको टर्की कूटनीतिक अभियानमा।
नेदरल्याण्ड्स: १ 90० दिनको कुनै अवधिमा तपाईलाई days ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
न्यूजील्याण्ड: तपाईंसँग यस पासपोर्टको भिसा need ० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न आवश्यक पर्दैन।
निकारागुआ: तपाईंसँग यस पासपोर्टको भिसा You ० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न आवश्यक पर्दैन।
नाइजर: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईंले एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा https://www.evisa.gov.tr/ मा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन।
नाइजेरिया: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईंले एक महिना लामो एकल ई-भिसा https://www.evisa.gov.tr/ मा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईंले केहि आवश्यकताहरू मेल गर्नुभयो भने। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
उत्तर कोरिया (कोरियाली प्रजातान्त्रिक गणराज्य): यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईंले इस्तंबुल एटाटर्क एयरपोर्टबाट एक महिना लामो एकल प्रवेश भिसा पाउन सक्नुहुन्छ।
उत्तर म्यासेडोनिया: तपाईलाई 90 ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
उत्तरी मारियाना टापु: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ।
नर्वे: तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
ओमान: तपाईंलाई टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। तपाइँले मा तीन महिना को लागी बहु प्रवेश e-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/ र तुर्की मा प्रवेश को पहिलो मिति देखि 90 महिना भित्र6दिन को लागी रहनुहोस्। यदि तपाईंसँग एक आधिकारिक (कूटनीतिक, सेवा वा विशेष) पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि तपाईंको यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
पाकिस्तान: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग एक आधिकारिक (कूटनीतिक, सेवा वा विशेष) पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा तपाईंको यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
पलाउ रिपब्लिक: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ।
प्यालेस्टाईनः टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, यदि तपाईं केही सर्तहरू मिलाउनुहुन्छ, तपाईंले at० दिन लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई कुनै पनि १ 90० दिन अवधिको लागि days ० दिनको लागि भ्रमणको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग आधिकारिक राहदानीको अर्को प्रकार छ (उदाहरणका लागि सेवा वा विशेष पासपोर्ट), तपाईंलाई अझै टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक पर्दछ।
पनामा: तपाईलाई पहिलो प्रवेश मितिबाट सुरू गरी १ 90० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
पापुआ न्यू गुयना: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ।
पराग्वे: तपाईंलाई १ 90० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
पेरू: तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
फिलिपिन्स: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग मान्य शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईंले आफ्नो एक महिना अवधि एकल ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट वा सेवा पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई Turkey० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन।
पोल्याण्ड: तपाईंलाई १ a० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
पोर्तुगल: तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
कतार: तपाइँलाई visa महिनाको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन, पहिलो प्रवेश मितिबाट गणना गरी।
क Cong्गो गणराज्य: टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग मान्य शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईंले आफ्नो एक महिना अवधि एकल ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
रोमानिया: तपाईलाई प्रवेशाज्ञा पहिलो दिनदेखि सुरु गरी १ 90० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
रूसी संघ: तपाईंलाई 60० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग सेवा पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई १ visa० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
रुवाण्डा: टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हाल छ शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति, तपाईं एकल प्रवेश ई-भिसा days० दिनको लागि वैध पाउन सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/, तपाईंले निश्चित सर्तहरूसँग मेल खाने कुरा प्रदान गर्नुभयो। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट वा सेवा पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई कुनै पनि १ 90० दिन अवधिमा Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा यात्रा गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन।
सेन्ट क्रिस्टोफर (सेन्ट किट्स) र नेभिस: तपाईलाई 90 ० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन।
सेन्ट लुसिया: यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईं टर्कीमा 90 ० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ। टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाइँ एक https://www.evisa.gov.tr/ मा तीन महिना लामो बहुविध ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडाइन्स: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं तीन महिनाको बहु ईन्ट्री ई-भिसा https://www.evisa.gov.tr/ मा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा पनि भिसा लिन सक्नुहुन्छ। वा तपाईं टर्की आइपुगेकोमा तीन महिना लामो बहु प्रवेश भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीहरूको लागि आधिकारिक (कूटनीतिक, सेवा वा विशेष) राहदानी छ भने तपाईं टर्कीमा 90 ० दिनको लागि भ्रमणका लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
सान मारिनो: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भ्रमणको लागि भिसा चाहिदैन।
साओ टोमे र प्रिन्सिपे: तपाईंलाई यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईंले एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा https://www.evisa.gov.tr/ मा पाउन सक्नुहुन्छ।
साउदी अरेबिया: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईले तीन महिना लामो बहु ईन्ट्री ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ https://www.evisa.gov.tr/। यदि तपाईंसँग एक आधिकारिक (कूटनीतिक, सेवा वा विशेष) पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई पहिलो प्रवेश मितिबाट सुरू गरेर १ 90० दिनमा days ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
सेनेगल: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने तपाईं एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एक महिनाको लागि https://www.evisa.gov.tr/ मा। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं आफ्नो यात्राको लागि भिसा Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा पाउन सक्नुहुनेछ।
सर्बिया: तपाईको भ्रमणका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन 90 ० दिन १ within० दिन भित्र, पहिलो प्रविष्टि मितिबाट सुरू गरेर। यदि तपाईं कूटनीतिक वा कन्सुलर मिसनहरूमा वा टर्कीमा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई आफ्नो असाइनमेन्ट अवधिको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
सेशेल्स: सेशेल्सका नागरिकहरू कूटनीतिक छन्, तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
सियरा लियोन: तपाईंलाई टर्कीमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने तपाईं एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ days० दिनको लागि https://www.evisa.gov.tr/ मा, यदि तपाईं केहि आवश्यकताहरू मेल गर्नुभयो भने। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं आफ्नो यात्राको लागि भिसा Turkey ० दिनको लागि टर्कीमा पाउन सक्नुहुनेछ।
सिंगापुर: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
स्लोभाकिया: तपाईको यात्राका लागि १ visa० दिन भित्र 90 ० दिनका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन, पहिलो प्रवेश मितिबाट सुरू गरेर।
स्लोभेनिया: तपाईको भ्रमणका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन 90 ० दिन १ within० दिन भित्र, पहिलो प्रविष्टि मितिबाट सुरू गरेर।
सोलोमन टापु: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं आफ्नो नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा १ days दिन लामो भिसा लिन सक्नुहुन्छ।
सोमालिया: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। www.evisa.gov.tr.
दक्षिण अफ्रीका: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं विदेशमा टर्की प्रतिनिधित्वबाट तीन महिना लामो बहु प्रवेश भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वा मा एक महिना अवधिमा एकल प्रवेश भिसा www.evisa.gov.tr। यदि तपाईंसँग एक आधिकारिक (कूटनीतिक, सेवा, वा विशेष) सेवा पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई 30० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
रिपब्लिक कोरिया (दक्षिण कोरिया): तपाईलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
दक्षिण सुडान: टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं पहिलो प्रवेश मितिबाट सुरू गरेर १ 90० दिन भित्र Turkey ० दिन भित्र भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
स्पेन: तपाईंलाई १ 90० दिनको कुनै पनि अवधिमा days ० दिनसम्म भिसा आवश्यक पर्दैन।
श्रीलंका: टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। www.evisa.gov.tr.
सुडान: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईंले एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा https://www.evisa.gov.tr/ मा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं पहिलो प्रवेश मितिबाट सुरू गरेर १ 90० दिन भित्र Turkey ० दिन भित्र भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
सुरिनाम: टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाई 30० दिन लामो एकल ईन्ट्री ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ www.evisa.gov.tr। यदि तपाईंसँग एक आधिकारिक (कूटनीतिक, सेवा, वा विशेष) राहदानी छ भने, तपाईं कुनै पनि १ 90० दिन अवधिको भित्र 180 ० दिनको लागि भिसा बिना टर्कीमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
स्वाजिल्याण्ड: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। www.evisa.gov.tr.
स्विडेन: तपाईलाई visa ० दिन को लागी १ 90० दिनको कुनै पनि अवधि मा भिसा आवश्यक पर्दैन।
स्विजरल्याण्ड: तपाईलाई 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
सिरिया: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ।
ताइवान: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईले एक महिना लामो एकल ईन्ट्री भिसा https://www.evisa.gov.tr/ मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले केही सर्तहरूसँग मिलाउनु भयो।
ताजिकिस्तान: तपाईलाई टर्कीमा यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन, छ महिना भित्र 30० दिन सम्म। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई पहिलो आगमनबाट छ महिना भित्र। ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग सेवा पासपोर्ट छ र तपाईं कूटनीतिक, कन्सुलर मिसन वा टर्कीमा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिनिधित्वको लागि नियुक्त हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईंलाई आफ्नो असाइनमेन्ट अवधिको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग सेवा पासपोर्ट छ तर तपाईं टर्कीमा नियुक्त हुनुहुन्न भने, तपाईं पहिलो entry महिना भित्र counting० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
तन्जानिया: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। www.evisa.gov.tr। यदि तपाईंसँग टान्जानियाली कूटनीतिक र सेवा पासपोर्ट छन् भने, तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि तपाईंको भिसाको आवश्यकता पर्दैन।
थाईल्याण्ड: तपाईलाई days० दिन भिसा आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईं आफ्नो यात्राको लागि टर्कीमा 30 ० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
टोगो: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। www.evisa.gov.tr/, तपाइँले केहि शर्तहरू मिलान गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईंलाई कुनै पनि १ 90० दिन अवधिमा 180 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
टोंगा: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ।
त्रिनिडाड र टोबैगो: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
ट्युनिसिया: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भ्रमणका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
टर्की गणतन्त्र उत्तरी साइप्रस: तपाईलाई भिसा चाहिदैन।
तुर्कमेनिस्तान: तपाईलाई Turkey० दिन सम्म टर्की यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
टुभालु: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ।
युगान्डा: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। www.evisa.gov.tr। यदि तपाईंसँग कूटनीतिक पासपोर्ट छ भने, तपाईं Turkey ० दिनको लागि भिसा बिना टर्की यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
युक्रेन: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि भ्रमणका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। युक्रेनी नागरिकहरूले टर्की यात्रा गर्न केवल एक मान्य बायोमेट्रिक परिचय कार्ड प्रयोग गर्न सक्दछन्। युक्रेनी कूटनीतिक र आधिकारिक सेवा पासपोर्ट पनि 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
संयुक्त अरब एमिरेट्स: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाइँ तपाइँको तीन महिना अवधि बहु प्रवेश ई - भिसा मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ www.evisa.gov.tr। यदि तपाईंसँग सरकारी कर्मचारीको लागि आधिकारिक राहदानी छ भने तपाईं आफ्नो यात्राको लागि टर्कीमा 90 ० दिनको लागि भिसा लिन सक्नुहुनेछ।
युनाइटेड किंगडम: तपाईको यात्राका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन 90 ० दिन कुनै पनि अवधि १ 180० दिनमा। कूटनीतिक पासपोर्ट पनि 90 ० दिनको लागि तपाईको यात्राको लागि भिसा चाहिदैन। सेवा र विशेष पासपोर्टहरू, सामान्यतया बेलायत सरकारसँग काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ, टर्कीमा प्रवेश गर्नको लागि भिसा लिन आवश्यक छ। यदि तपाईं एक 'ब्रिटिश सब्जेक्ट', 'ब्रिटिश राष्ट्रिय विदेशी,' र 'ब्रिटिश संरक्षित व्यक्ति' हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई भिसा चाहिन्छ। र तपाइँ तपाइँको नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावास मार्फत मात्र भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं मा भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ www.evisa.gov.tr.
उरुग्वे: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि यात्राको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
उज्बेकिस्तान: तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि यात्राको लागि भिसा चाहिदैन। कूटनीतिक पासपोर्ट पनि 90 ० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। तर आधिकारिक राहदानीहरू, सामान्यतया सरकारी कर्मचारीहरूलाई दिइन्छ, टर्की आउन भिसा चाहिन्छ।
भानुआटु: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं आफ्नो नजिकको टर्की दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा १ days दिन लामो भिसा लिन सक्नुहुन्छ।
भ्याटिकन (होली हेर्नुहोस्): तपाईंलाई 90 ० दिनको लागि यात्राको लागि भिसा चाहिदैन।
भेनेजुएला: तपाईलाई visa ० दिनसम्म कुनै भिसाको आवश्यकता पर्दैन जुन १ 90० दिनको अवधिमा। यदि तपाईंसँग आधिकारिक सेवा पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई days० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
भियतनाम: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईंले एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा https://www.evisa.gov.tr/ मा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग आधिकारिक सेवा पासपोर्ट छ भने, सामान्य रूपमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई दिइन्छ, तपाईं टर्कीमा Turkey ० दिनको लागि भ्रमणको लागि भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
पश्चिमी सामोआ: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ।
यमन: टर्कीमा प्रवेशका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। www.evisa.gov.tr। यदि तपाईंसँग आधिकारिक सेवा पासपोर्ट छ भने तपाईंलाई days० दिनको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
जाम्बिया: यस पासपोर्टको साथ तुर्की प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। तपाईं आफ्नो एक महिना अवधि ईन् भिसा वेबसाइट मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ www.evisa.gov.tr.
जिम्बावे: यस पासपोर्टको साथ टर्कीमा प्रवेश गर्न तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग हालको शेन्जेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत वा आयरल्याण्ड भिसा वा निवास अनुमति छ भने, तपाईं एक महिना लामो एकल प्रवेश ई-भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। www.evisa.gov.tr.
टर्की भिसा प्रकारहरू
यो भिसा आवेदन प्रक्रिया is छैन जटिल, you गर्न सक्छन् भिसा लागू गर्नुहोस्or सजिलैसँग टर्की.
All spells of अनुप्रयोगहरू बनाउन सकिन्छ मार्फत को स्टिकर भिषा पूर्व आवेदन प्रणाली।
यो आवेदकहरुको अपलोड को डाटा आवश्यक लागि भिसा आवेदन लाई स्टीकर भिसा पूर्व अनुप्रयोग प्रणाली.
पर्यटक वा व्यवसायीहरुका लागि
(a) पर्यटक भ्रमण
(b) एकल ट्रान्जिट
(c) डबल ट्रान्जिट
(d) व्यापार बैठक
(e) सम्मेलन वा सेमिनार
(g) सांस्कृतिक घटना
(i) आधिकारिक भ्रमण
(j) टर्की गणतन्त्र भ्रमण गर्नुहोस्।
२ - आधिकारिक भिसा -
(a) काम तोकिएको
- विद्यार्थी शिक्षा भिसा
(a) इंटर्नशिप भिसा
(c) इंटर्नशिप एआईएसईसी
(d) टर्की भाषा कोर्स उद्देश्य
(e) पाठ्यक्रम उद्देश्य
(f) शिक्षा लक्ष्य
(g) टर्कीको उत्तरी गणराज्यमा शिक्षा
4- काम गर्दै वीसा
(a) काम उद्देश्य / विशेष काम उद्देश्य
(ख) तोकिएको पाठकहरू / शैक्षिक
यात्रा कागजात उनीहरूको भिसा वा ई भिसा पछि कम्तिमा days० दिनको म्याद समाप्त हुने मिति संग।
टर्की भिसा आवेदन फाराम सजीलो पहुँचयोग्य छ।
आवेदकले ठीकसँग फारम भर्नु पर्छ।
र सहि विवरणका साथ फारममा हस्ताक्षर गर्नुहोस्।
त्यसो भए पूर्ण भएको फारम अनलाइन वा नजिकको केन्द्र, वाणिज्य दूतावास, वा दूतावासमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
तपाईंले भिसासँगै पेश गर्नुपर्नेछ।
प्रसंस्करण शुल्क सम्झनुहोस्
भिसा जारी भएपछि आवेदकले यसलाई स .्कलन गर्न सक्दछन्।
वा यो केन्द्र बाट कुरियर भयो।
कुरा गर्न नोट
भिसा प्रशोधन समय working कार्य दिनहरू हो।
यो दूतावास लागू हुने मितिबाट हो।
यदि एक पर्यटक भिसाका लागि आवेदन दिन एक आवेदन जारी गरियो।
यसले समावेश गर्नुपर्दछ-
व्यक्तिको पहिचान नम्बर
यातायात भिसा -
बहु प्रविष्टि भिसा मान्य।
यो कम्तिमा एक वर्षको लागि मान्य छ।
टर्की भिसाका लागि कुन कागजातहरू आवाश्यक छन्?
तपाईंले टर्कीको लागि भिसाका लागि आवेदन दिनका लागि निम्न कागजातहरू पठाउनु पर्नेछ। यो तपाइँको राहदानी र यसमा भिसामा निर्भर गर्दछ।
भिसा आवेदन फाराम विधिवत सम्पन्न भयो र हस्ताक्षर गरियो।
यात्री आकारमा दुई फोटोहरूले सेतो पृष्ठभूमि लिए। (२. x x २. c सेन्टीमिटर)
एक राहदानी टर्की मा आगमन को मिति देखि छ महिना को न्यूनतम अवधि को लागी मान्य छ।
नोट गर्नुहोस् कि कम्तिमा भिसा टिकट सहित दुई खाली पृष्ठहरू आवश्यक रूपमा राहदानीमा उपस्थित हुनुपर्दछ।
पहिलो र अन्तिम राहदानी पृष्ठहरू दुई प्रतिलिपिहरूमा स्क्यान गरियो।
यदि तपाईं कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग मौलिक छुट्टी पत्र हुनुपर्दछ।
स्वरोजगार व्यक्तिहरूको लागि, अनुमोदित हस्ताक्षर, नाम, र कम्पनी सील लेटरहेडको एक कभर पत्र। तपाईंसँग प्रारम्भिक दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हुनुपर्दछ।
तपाईंले निगमन प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिनै पर्छ।
बैंकको स्ट्याम्प र बैंकको हस्ताक्षरको साथ स्टेटमेन्ट। घोषणाले एक रूपैयाँ १ वा माथिको न्यूनतम कोष प्रतिनिधित्व गर्दछ।
होटल बुकिंग पुष्टि भयो
फिर्ती टिकट रिपोर्ट गरियो
आवेदन आवेदकको प्राधिकरण पत्र एक ट्राभल एजेन्ट साथ ट्राभल एजेन्टको फोटो आईडी पेश गर्नु पर्छ
तपाईंले माथिको कागजातहरू पनि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
नाबालिगको सहमति फाराम।
यदि केसमा तपाई आफैले वा आफ्नो अभिभावकको साथ उडान गर्नुहुन्छ।
NOC दुबै नाबालिग र अभिभावक छविहरूको साथ मोहर।
तपाईंले रिपोर्टको ख्याल गर्नुपर्छ।
मेडिकल लागत, पुनर्वास, र स्वदेश फिर्ताको लागि यात्रा लाभहरू।
यसले दैनिक भत्ता र व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्युलाई पनि कभर गर्नुपर्दछ। यात्रीलाई कम्तिमा ,30,000०,००० यूरोको बीमाले छोप्नेछ।
तपाईं सजीलै टर्कीको लागि भिसा अनुरोध फाराम डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
यो गर्न, आवेदकले विधिवत आवेदन फारम भर्नु पर्छ र सहि विवरणहरूको साथमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ।
पूर्ण फारम र भिसा आवेदन शुल्क बुझाउनु पर्छ।
यो नजिकको भिसा आवेदन केन्द्रमा हुनुपर्दछ।
एक पटक भिसा प्रशोधन भएपछि आवेदकले केन्द्रबाट सम्बन्धित कागजातहरू स collect्कलन वा मेल गर्न सक्दछ।
यसैले माथिको जानकारी टर्कीका लागि भिसा आवेदन दिनका लागि छ।
भिसाका लागि आवेदन दिन अघि माथिका विवरणहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्।
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, टर्की भिसा तीन व्यापार दिनहरूको लागि प्रशोधन हुन्छ।
यो दूतावासले आफ्नो आवेदन पेस गरेको समयबाट हो।
टर्की ई भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
१ things चीजहरू जुन तपाईंले अनुप्रयोग बनाउनु अघि जान्नु आवश्यक पर्दछ।
टर्की भिसा वा ई-भिसा आवेदनहरू (यदि योग्य भए) आगमनमा प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
यी १० अप्रिल २०१ arrival बाट आगमनमा मान्य हुँदैन।
ई-भिसा केवल पर्यटन र उद्योगको लागि मान्य छ।
"अब लागू गर्नुहोस्" मा क्लिक गरेर र नागरिकता चयन गरेर तपाईं ई-भिसा योग्यता प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ। बच्चा सहित प्रत्येक यात्रीका लागि छुट्टै ई-भिसा प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
जे होस् बच्चाहरू तिनीहरूका अभिभावकको राहदानीहरूमा सामेल हुन्छन्।
कम्तिमा छ महिना तपाईं टर्की पुग्नु भन्दा पहिले, तपाईंको पासपोर्ट मान्य हुनै पर्छ। राष्ट्रियतामा निर्भर गर्दै त्यहाँ थप मापदण्ड हुन सक्छ।
तपाईको राष्ट्रियता र यात्रा को मिति छान्दा तपाईलाई बताउन सकिन्छ।
"अब प्रविष्ट गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस् र ई-भिसा शुल्कको बारेमा अधिक जान्नको लागि तपाईंको नागरिकता लिनुहोस्।
तपाईं मास्टरकार्ड र भिसाको साथ क्रेडिट वा डेबिट कार्डमार्फत मात्र भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि टर्की बैंक कार्ड स्वीकृत छैन।
कृपया नोट गर्नुहोस्: निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कार्ड वैदेशिक खर्चको लागि खुला छ। साथै, यो हुनुपर्दछ र "थ्रीडी सेफ प्रणाली" पनि हुनुपर्दछ।
तपाईंले 'स्वीकृत' बटन थिच्नु पर्छ र २eघण्टा भित्र भुक्तान जारी राख्नुपर्नेछ 'ईमेल ठेगाना चेक' सन्देशको प्राप्ति पछि।
यदि होईन भने, आवेदन स्थगित हुन्छ। किनकि प्रणाली अनुमोदन हुने छैन र तपाईंले नयाँ अनुप्रयोग अनुरोध गर्नुपर्नेछ।
लेनदेनको समयमा, यदि भुक्तानी निलम्बन भयो र असफल प्रक्रिया।
कृपया समर्थन डेस्कलाई सूचित गर्नुहोस् ("सम्पर्क फारम मार्फत" मुख्य पृष्ठमा "हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्" सेक्सन अन्तर्गत।
अन्यथा नभएसम्म, कृपया नयाँ अनुप्रयोग वा भुक्तानी नगर्नुहोस्। साथै, यी अधूरो लेनदेन को घटना मा।
कुनै फिर्ताको लागि मन्त्रालय जिम्मेवार हुनेछैन।
इ-भिसाका लागि शुल्क मात्र अमेरिकी डलरमा छ।
तपाईंसँग अमेरिकी खाता छैन। एक सम्बन्धित रकम तपाईंको स्थानीय मुद्रामा तपाईंको खाताबाट कटौती हुन्छ।
भुक्तानी गरिसकेपछि, तपाईंलाई तपाईंको इ-भिसा डाउनलोड गर्न जडानको साथ ईमेल पठाइन्छ। जब तपाईं टर्कीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र छोड्नुहुन्छ, कृपया प्रिन्ट गर्नुहोस् र तपाईंको ई-भिसा आफूसँग राख्नुहोस्।
तपाईंको भिसाको वैधता अवधि तपाईंको बसाईको लम्बाइ भन्दा फरक छ। वैधता अवधि भित्र, तपाईं कुनै पनि समयमा तुर्की सामेल हुन सक्नुहुन्छ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि यदि तपाईंले निर्दिष्ट मिति भन्दा अघि प्रविष्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले नयाँ अनुरोध फाइल गर्नु पर्छ।
प्रक्रिया पछि, ई-भिसा प्रक्रिया पछि कुनै पनि विवरण अद्यावधिक हुँदैन। तपाईको सूचना तपाईको राहदानी जानकारी जस्तै उस्तै नै छ भन्ने कुराको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईंको e-भिसा अन्यथा अमान्य हुनेछ, र कुनै फिर्ती फिर्ता छैन।
धेरै वेबसाइटहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई सेवा शुल्कको सट्टा टर्की ई-भिसा प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने दावी गरेका छन्। हाम्रो उनीहरूसँग कुनै अन्तरक्रिया छैन।
तसर्थ, हामी कुनै पनि दुरुपयोग वा उनीहरूको जानकारी को नोक्सान को लागी उत्तरदायी हुन सक्दैन।
कुनै टर्की दूतावास वा सामान्य वाणिज्य दूतावास लिंक ई-भिसा आवेदन को लागी उपलब्ध छैन।
तपाईंले ई-भिसामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ मद्दत डेस्क "हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्" को माध्यमबाट सबै जानकारीको लागि
तपाईं आफैंमा टर्की भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यहाँ तर यदि तपाईंलाई आफ्नो भिसा आवेदनको साथ मद्दत चाहिन्छ भने तपाईं भरपर्दो भिसा सेवा मार्फत जान सक्नुहुन्छ VisaHQ or आईवीसा। तपाईको राष्ट्रियता र तपाईसँग भएको समयमा निर्भर गर्दै, एउटा सेवा अर्को भन्दा सुविधायुक्त हुन सक्छ।
आईवीसाको साथ टर्की भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
भिसाएचक्यूको साथ टर्की भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
टर्कीका लागि भिसा कसरी पाउने
प्यालेस्टाइनको राज्यमा भिसा बिना यात्रा
कसरी एक स्विजरल्याण्ड Schengen भिसा को लागी आवेदन गर्ने?
फेब्रुअरी 8, 2021
लिबिया को लागी भिसा मुक्त देशहरु
जापान भिसा मुक्त देशहरु
घाना को लागी भिसा मुक्त देशहरु
टर्कीमा भ्रमण गर्नका लागि उत्तम ठाउँहरू
अक्टोबर 26, 2019